Uhlobo lwebhotile ejikelezayo yaseChina Umgangatho wokuphamba kokuhamba kweTowers Umvelisi kunye noMthengisi | Yubing
Inqaba yokupholisa yesekethe evulekileyo yindawo yokuhambisa ubushushu, eyenza ukuba amanzi apholiswe ngokudibana ngqo nomoya.
Utshintsho lobushushu olusuka emanzini luye emoyeni lwenziwa ngokuyinxenye ngogqithiso lobushushu oluvakalayo, kodwa ubukhulu becala ngogqithiso lobushushu olufihliweyo (umphunga wenxalenye yamanzi emoyeni), owenza ukuba kube nakho ukufikelela kumaqondo obushushu okupholisa angaphantsi kunamaqondo obushushu afudumeleyo.
Amanzi ashushu aza kupholiswa afakwa kumphezulu wenqaba evulekileyo yokupholisa ngombhobho. La manzi ahlulelwe kwaye asasazwa ngaphezulu kobushushu obutshintshisanayo ngemilomo yoxinzelelo lwamanzi esezantsi.
Uvuthelwa ngumtshini, umoya omtsha ungena kwicandelo elisezantsi leyunithi yokupholisa evulekileyo kwaye ubaleke uye kwicandelo elingaphezulu emva kokufudunyezwa nokuhluthiswa ngokudlula kubushushu obumanzi.
Ngenxa yoxinzelelo lomhlaba, ngenxa yomphezulu wotshintshiselwano, amanzi asasazeka ngendlela efanayo, awela phantsi konke ukuphakama. Umphezulu wotshintshiselwano uyonyuswa.
Amanzi, apholileyo enkosi ngokungenisa umoya ngenkani, awela kwisitya esityebileyo emazantsi enqaba. Emva koko amanzi amunxwa ngesihluzo. Ukuphelisa iidrift ezikwi-outlet yomoya kunciphisa ilahleko yokuphambuka.
Uhlobo lwebhotile yokupholisa ukuhamba kwinqaba yamkela isixhobo sokucheba esisezantsi sokuhambisa amanzi ngokulinganayo ngaphakathi kwinqaba. Le yeyona nqaba iqhelekileyo kunye noqoqosho yesizukulwana sokuqala sokupholisa okoko kwabakho iinqaba zokupholisa. Isingxobo seFiberglass esomeleziweyo sePolyester (i-FRP) senziwe isetyhula ukumisa iimfuno zokubekwa ezizodwa kwaye akuchaphazeleka kwimikhombandlela yomoya ekhoyo. Le modeli ilungele iimfuno ezincinci zokupholisa, ukuqala nge-5 HRT (itoni yokulahla ubushushu) ukuya kwi-1500HRT. Olu luhlu lokupholisa iinqaba zilungele usetyenziso ngokubanzi lwe-HVAC kunye nokupholisa inkqubo yokuvelisa.
Ukusebenza okuphezulu kunye nokusebenza
Khaphukhaphu kwaye yomelele
Izinketho zengxolo ezisezantsi ziyafumaneka
Egqithileyo Uyilo olwenziweyo loNqamlezo lweeTower zokuPhehlwa kwaMandla, i-HVAC enkulu kunye nezixhobo zeMizi-mveliso
Okulandelayo: Uyilo olwenziweyo lokupholisa iTowers ngembonakalo yoxande
yokonga umbane yokupholisa inqaba
ukusebenza eliphezulu tower tower
Uhlobo lwebhotile yokupholisa inqaba
Uyilo olwenziweyo lokupholisa iiTowers ngexande elingunxantathu ...